Shiinaha warshad macaan oo dhanaan ah oo soosaarayaasha ah | Huikang
Cunnooyinka Macmacaanka ah iyo kuwa dhadhanka ah (Macaan iyo Dabiicyo Fudud) waa saxan dhaqameed matala oo leh dhadhan macaan iyo dhanaan. Waxay u isticmaashaa feeraha doofaarka ee cusub maadada ugu weyn, hilibku waa mid cusub oo jilicsan, midabka saxanka la dhammeeyayna waa casaan dhalaalaya.
"Macaan iyo dhanaan" waa dhadhan ay leeyihiin dhammaan cuntooyinka waaweyn ee Shiinaha. Feeraha doofaarka ee macaan iyo kuwa dhanaan waxay asal ahaan ka soo jeedaan Zhejiang waana saxanka caadiga ah ee Zhejiang.
Feeraha doofaarka ee macaan iyo dhanaan ee dhabta ah ayaa si gaar ah ugu saabsan hababka iyo waxyaabaha ka kooban. Guud ahaan, feeraha iyo feeraha ayaa la isticmaalaa. Feeraha doofaarka waxay u baahan yihiin in laga saaro dhiigga, la miiro oo la kariyo dhadhanka, ka dibna lagu dahaadho bur iyo si qoto dheer loo shiilay illaa iyo inta dusha sare ay ka noqonayso dahab iyo jajab. U bax si aad hadhow u isticmaashid. Ka dib marka la helo midabka sonkorta, feeraha ayaa lagu shiilay digsiga, ugu dambeyntiina waxaa lagu daray khalka bariiska ee dhadhanka macaan iyo dhanaan. Bariiska khalka ah waa in halkaan lagu isticmaalo. Dhadhanka khalka duugga ahi aad buu u xoog badan yahay oo wuxuu saameeyaa dhadhanka!
Maaddooyinka loo isticmaalo cunnada Shanghai ayaa si fudud u macaan oo dhanaan. Maraqa yaanyo ayaa loo isticmaalaa dhadhanka. Tani sidoo kale waa astaamaha cunnada Shanghai. Cunnooyinka 'Zhejiang' waxay hodan ku yihiin maaddooyin, aad u fiican, oo ay ka buuxaan midab, udgoon iyo dhadhan. Cunnooyinka Sichuan ayaa ah doorashada ugu fiican feeraha macaan ee dhanaan. Ku laabo sonkor, milix iyo khal.
Maraqa loogu talagalay feeraha macaan iyo dhanaan ee hilibka doofaarka ayaa ah kaliya suxuunta Shanghai ee leh maraqa yaanyo. Suxuunta Shanghai waxay leeyihiin dhadhan fudud, halka suxuunta Zhejiang iyo suxuunta Sichuan ay aad muhiim u yihiin. Feedhaha doofaarka ee macaan iyo kuwa dhanaan ee cunnada Shanghai iyo cunnada Zhejiang waa suxuun la kariyey, halka feeraha macaan iyo dhanaan ee ku jira cunnada Sichuan ay yihiin cunno qabow oo caan ku ah Sichuan. Waxay isticmaashaa qaab karinta oo qoto dheer la kariyey. Waxay iska leedahay dhadhanka macaan iyo dhanaan, oo leh saliid qafiif ah, caraf udgoon iyo qoyaan. Waa dhanaan iyo jaalle, waa appetizer ama appetizer wanaagsan. Aad bay u jecel yihiin dadka Shiinaha.
Xuddunta doofaarka ee macaan iyo dhanaan ee Huaiyang ayaa isku daraysa astaamaha cunnada Zhejiang iyo Sichuan ee farsamada, waxayna isku daraysaa astaamaha cunnada Shanghai ee dhadhanka. Waxaa lagu cusbaynayaa macaan iyo dhanaan, basal iyo toon, oo saliid lagu shiilay. Taariikhda feeraha doofaarka ee macaan iyo dhanaan ee lagu sameeyay Huaiyang cunnada cunnada Way ka Gaaban tahay saddexda cunno ee kale.
Hore: Chongqing Digaag Basbaas leh
Xiga: Digaag digaag Pao
Qeybinta Cuntada Barafoobay
Hilib doofaar leh oo la ilaaliyay